Moe Kai: ကြည်လင်တဲ့ အသားအရည်
စာလဲ မရေးဖြစ်တာ အတော့်ကို ကြာသွားပါပြီ။ အတော့်ကို အလုပ်တွေ ရှုပ်တာနဲ.ရယ် အချိန်မရှိတာရယ်နဲ.အပျင်းထူတာနဲရယ် အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပဲ ဆိုပါတော့။
အလုပ်တွေရှုပ်၊ ပင်ပန်းပြီး ညညဆို မျက်နှာမသစ် သွားမတိုက်ပဲ အိပ်ပျော်ပျော် သွားတာလဲ မကြာခဏပါ။ ရာသီဥတုက ဆိုးတာနဲ. ဆောင်းတွင်းလေက ခြောက်တာနဲ. Heater ရဲ.ဆိုးကျိုး အားလုံး ပေါင်းပြီး ဒီရက်ပိုင်း ကျမ မျက်နှာအသားအရည် အတော်ဆိုးလာပါတယ်။ အသားကပက် အသားက ခြောက်၊ ကြည်လင်မှုက မရှိတော့၊ မလေးရှားသွားတုန်းက နေလောင်ထားတာနဲပါ ရောပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ ဖြေရှင်းဖို.နည်းလမ်း ရှာရတော့တာပေါ့။
ကျမက မိတ်ကပ် သိပ်မလိမ်းပါ။ အလွန်ကံကောင်းပြီး နဂို အသားအရည်က ဝက်ခြံမပေါက် အဖုအထစ်မရှိတော့ Moisturizer နဲ. Foundation နဲနဲလေး ပါတယ်ဆိုရုံ လိမ်းတာနဲ.တင် ပြီးရောပါ။ Foundation ကလဲ တဘူး ဝယ်ထားရင် ၂နှစ်ကျော်အောင် လိမ်းရတတ်ပါတယ်။ အခု အောက်ခံ အသားအရည်က အရမ်းဆိုးနေတော့ foundation လဲ လိမ်းလို.မရ၊ Moisturizer တွေကို ဘယ်လောက် ဈေးကြီးတာ ဝယ်လိမ်းပေမယ့် တိုးတက်မှုက မရှိ။
ဒါနဲ. Youtube မှာ အမျိုးသမီး တချို.ပြောပြတာ တွေ.လိုက်တာ ပျားရည်က အသားအရည်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။ အိမ်မှာ ပျားရည်တွေကလဲ ရှိနေတော့ သူတို.လုပ်ပြတဲ့ အတိုင်း ပျားရည်ရယ်၊ သကြား အမှုန်.ညက်ညက် ကလေးတွေရယ်၊ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ Glycerin နဲနဲရယ် ရောပြီး မျက်နှာကို အသားလေး ပွတ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်က ပိုးသတ်တဲ့ အာနိသင်ရယ်၊ အသားအရည် အစိုဓါတ်ထိန်းပေးတာရယ်၊ သကြားအမှုန်းကလေးတွေက exfoliate လုပ်ပေးတာရယ် (exfoliate ဆိုတာ အသားအရည် အပေါ်က သေနေပြီးသား cells လေးတွေကို ဖယ်ထုတ် ရှင်းပေးတာကို ခေါ်တာပါ) ပေါင်းပြီးတော့ မျက်နှာကို ရေနဲ. ဆေးချလိုက်တယ် ဆိုတာနဲ. ချက်ချင်းပဲ မျက်နှာအသားအရည်ဟာ ကြည်လင်ပြောင်တင်းပြီး သန်.ရှင်းလာတာကို တွေ.ရတာပါပဲ။ အသားလေးကလဲ အလွန်နုပြီး ချောသွားပါတယ်။ အသားခြောက်ပြီး အဖတ်ဖတ် ဖြစ်နေတာတွေလဲ လုံးဝကို ပျောက်သွားရော။
ဒီနိုင်ငံမှာက Exfoliate လုပ်တာ အတော်ခေတ်စားပါတယ်။ လူ.အရည်ပြားမှာ Cells တွေက အသေမြန်သလို အတွင်းကနေ cells အသစ်တွေ ထပ်ထပ်ဖြည့်ပေးတာလဲ အလွန်မြန်ပါတယ်။ သေပြီးသား cells တွေက အရည်ပြားပေါ်မှာ ရှိနေသေးရင် အသားက ကြည်လင်မှု ကို ဆုတ်ယုတ်စေတယ်လို. ဆိုတာပါပဲ။ Exfoliate လုပ်ပေးတော့ သေပြီးသား cells လေးတွေ ရှင်းရှင်းပေးတော့ အသားအရည် ဝင်းပ ကြည်လင်တယ်ပေါ့။
ကျမကတော့ exfoliate ခဏ ခဏ မလုပ်ချင်တော့ အခု အားရင် အားသလို မျက်နှာကို ပျားရည်လေးသုပ် ၁၅မိနစ်လောက်ထား၊ ပြီးတော့ ရေနဲ ပြန်ဆေးတာမျိုး အခု တပတ် ၂ခါလောက် လုပ်ပေးဖြစ်နေပါတယ်။ စိတ်လိုရင်လိုသလို သကြားမှုန်းကလေး ရောပြီး ၁ပတ် ၁ခါ သို. ၂ပတ် ၁ခါလောက် exfoliate လုပ်ပေးပါတယ်။ မနေ.က ညက သူငယ်ချင်းတွေနဲ. စကားပြောတုန်း ကျမ အသားအရည် ဘယ်လောက် ကောင်းကြောင် ချီးကျွေးစကားတွေ (အဟမ်း) ကြားရတော့ ကျမရဲ. ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန် ရှိတဲ့ ဒီနည်းလေးကို ရှယ်ချင်စိတ်လေး ပေါက်လာတာနဲပဲ အရင်လို ဆေးပညာ အားကစား ဆေးပညာ အကြောင်းနဲ. မဆိုင်တဲ့ ဒါလေး ဘလော့ ရေးဖြစ်သွားရကြောင်းပါ။